रवि लामिछाने कसैबाट संचालित हुनसक्छन्ः हरिशरण लामिछाने – Annapurna Post News
June 23, 2022 June 23, 2022 sujaLeaveaComment on रवि लामिछाने कसैबाट संचालित हुनसक्छन्ः हरिशरण लामिछाने
काठमाडौं । चर्चित पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र उनका सहोदर दाई हरिशरण लामिछानेबिचको मनमुटाप छताछुल्ल भएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा गर्नेहरुको भिड लागेसँगै दुबै दाजु–भाई सञ्चार क्षेत्र छाड्दै राजनीतिमा लाग्ने निर्णय गरे । तर मिलेर होइन भिन्न–भिन्न तरिकाले ।
हरिशरण लामिछानेले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको समुह बनाउँदै दुई दिन पहिले काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ बाट संघिय निर्वाचनमा सांसदका लागि उम्मेदवार घोषणा गरेका थिए । तर त्यसमा उनका भाई रवि लामिछाने छुटे । किन र कसरी भन्दै धेरैले प्रश्न र जिज्ञासा राखे ।
त्यसकै एक दिनपछि हिजो रवि लामिछानेले आफ्नै नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ घोषणा गरे तर त्यसमा उनका सहोदर दाई हरिशरण लामिछाने समावेश भएनन् बरु केही घण्टामै सामाजिक संञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस् लेख्दै रवि लामिछानेको आलोचना गर्दै ‘राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टी’मा आजिवन संलग्न नहुने घोषण नै गरे ।
रवि लामिछाने चितवनको हिरासतमै रहदा दाजु–भाईबिच त्यति राम्रो सम्बन्ध नरहेको भन्ने गाईगुई हल्ला चलेको थियो । अहिले सम्म रवि लामिछानेले आफ्नो दाई हरिशरण लामिछानेबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् तर दाजु हरिशरण लामिछानेले भाई रवि लामिछानेले खुलेरै आलोचना गरिरहेका छन् । त्यसले दाजु–भाईबिच सम्बन्ध बिग्रिएको रहेछ भन्ने थप पृष्ठि गरेको छ ।
आफ्नो भाई रवि लामिछाने संञ्चार क्षेत्रमा आउँनुमा आफ्नो भुमिका रहेको तर उनले हतारमा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ घोषणा गरेर कच्च पन देखाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भने, ‘सैद्धान्तिक विषयहरुमा मेरो कोहीसँग पनि मत नमिल्न सक्छ, मेरो सिद्धान्तको कुरा दाई–भाई त परको कुरा, किन दाईले भाईको कुरा मान्ने हो ? सम्बन्ध सामाजिक एउटा संरचना भित्र बन्ने कुरा व्यवहारिक कुराहरु त छदै छ नि ! माया प्रेमका कुरा छोडौं होईनन, यो युद्धको कुरा हो । माया प्रेमको कुरा होईनन, यहाँ न रविले हरिलाई गन्छ, न हरिले रविलाई गन्छ, यसमा प्रष्ट हुनुस् ।
भाई रवि लामिछाने प्रति आफ्नो व्यक्तिगत ‘रिसिबि’ नभएको तर उनले आफैमाथि खेलभाड गरेर हल्का रुपमा राजनीतिमा आएको र नीतिगत, सैद्धान्तिक, सिद्धान्तगत रुपमा प्रष्ट नभएको बताए ।
दाई–भाईको कुरा गर्ने हो भने लाईनमा आउँनु पर्ने रवि तर लाईनमा नभएको र दाजु भाईको विचार फरक भएपनि रविले गर्न लागेको काम राम्रो भए पनि बचकाना भएको उनले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘अब हिजो टेलिभिजन खोल्दा खेरी एउटा टेलिभिजनबाट अर्को टेलिभिजनमा गयो, उसले धेरै ‘कमिटमेन्ट’ ग¥यो यि कार्यक्रम गर्छु, यो गर्छु, ‘लिडरसिप’ गर्छु, उ गर्छु, त्यो गर्छु, यो गर्छु, कहाँ गयो त्यो ? ‘कमिटमेन्ट’हरु भोलि अलिकति माहोल बिग्रिने बितिकै म हिडे भन्न बेर छैन, मलाई अलि कति ‘डाउट’ लागि राछ के, उनले भने । त्यस्तै उनले भाई रवि लामिछानेमाथि ‘डाउट’ लागेको र धेरै कुराहरु गोप्य राखेकाले उनी कसैबाट संचालित हुनसक्ने समेत बताए ।
रवि लामिछानेको राजनीति ‘म्याटर’मा केही कुराहरुमा आफुलाई चित्त नबुझेकाले त्यो पार्टीमा आजीवन नजाने र स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्नु पर्छ भन्ने धारणा देश भरी एउटा सकारात्मक वातावरण भएको बताएका छन् ।
आफुमा धेरै ठुलो आकांक्षा नभएको तर आफुसँग जे क्षमता छ त्यही गर्ने र रविको शुभचिन्तक, फलोअर्सहरु लाखौं भएको र व्यवहारीकरुपले एक कदम अगाडी कि दुई कदम पछाडि जाने, उनको भनाई छ ।